Shirkadda Brand ee Gaadiidka Kyrgyzstan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinShirkadda Brand ee Gaadiidka Kyrgyzstan
15 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Warqad Hordhac ah, TURKEY
shirkad shirkadeed sumad ku leh gadiidka kyrgyzstan
Qeybta gaadiidka ayaa ku jirtay waqtiyo aad u mashquul badan marka loo eego kororka xogta dhoofinta iyo soo dejinta sanadihii la soo dhaafay. Dalkeenna, oo xiriir ganacsi la leh ku dhawaad ​​dhammaan waddamada adduunka, gaar ahaan Yurub, Aasiya iyo waddamada Bariga Dhexe, wuxuu sidoo kale ku wajahan yahay waddamada Aasiya ka dib daraasadaha ballaaran ee Yurub. Dhawaan, horumarro muhiim ah ayaa laga duubay howlaha dhoofinta iyo soo dejinta ee waddamada Aasiya, gaar ahaan Kyrgyzstan, qaybta gaadiidkuna sidoo kale iyadu way u dhaqaaqday sidaas oo kale.
Dalkeenna, shirkadaha saadka ee ka shaqeeya dalalka Aasiya ee Kyrgyzstan waxay galeen daraasado kala duwan. Si kastaba ha noqotee, maadaama shirkadaha saadka ee horey ugu jiray khadka Kyrgyzstan laga soo bilaabo waqtigii la soo dhaafay ilaa maanta, waxay si firfircoon ugu lug leeyihiin qadkaan. Mid ka mid ah shirkadaha sida joogtada ah uga fuliya howlaha gaadiidka ee Kyrgyzstan waa Shah Global Logistics. shirkadda Shirkadaha Maraakiibta ee Kyrgyzstan Maaddaama ay tahay mid ka mid ah ururo dhif ah oo ka mid ah daraasadaha iyo mashaariicda aadka u dadaalka badan, waxay fulisaa gaadiid dhowr shirkadood oo ku hawlan wax soo saarka iyo ganacsiga shisheeye ee dalkeenna.
Shirkadda gaadiidka wadada, taas oo inta badan bixisaa ka Turkey si Kyrgyzstan door firfircoon shaqo our on baahida gaadiidka hawada iyo xadiidka. Ka sokow dhammaystirka howlaha daah-furka ee safarka gawaarida xamuulka, waxay sidoo kale bixisaa adeegyo gaadiid qayb ahaan maalmaha qaarkood ee usbuuca, iyadoo la siinayo inay ka baxdo bakhaarradeena Istanbul, iyo sidoo kale rar xamuul culus, gaadiid xamuul oo la qaboojiyey, gaadiid xamuul iyo gaadiid xamuul. Gawaaridayada, oo loo abaabuli karo in laga raro dhammaan magaalooyinkeenna, waxay ku fuliyaan hawlgallo gaadiid badbaado leh marka loo eego xaddiga caymiska CMR ee hoos yimaad gacanta darawaladayada khibrada leh iyo kooxda hawlgallada khabiirada.
Ka sokow adeegyada logistics, shirkadeena waxay leedahay adeegyo xagga howlaha howlaha dekada, ruqsad bixinta kastamka, bakhaarka iyo hayada. Waxaa loo dhoofiyaa Kyrgyzstan Khibraddeeda waaya-aragnimadii hore, waxay si aad ah ugu badan tahay howsha horumarisa laga bilaabo waqtiga rarida illaa xamuulka. Dhammaan codsiyada ka yimaada Kyrgyzstan ee shirkadeena si dhakhso leh ayaa loo qiimeeyaa oo soo noqoshada waxaa lagu bixiyaa qaab dhismeedka xaaladaha xamuulka ugu habboon iyo gaadiidka waqti dhow.
Cunto wargalin: Shirkadaha Saadka
Dhameystirka Dhismaha Wadada Tareenka ee Shiinaha-Kyrgyzstan-Uzbekistan, Kyrgyzstan's '
Madaxweynaha, "Kuwa ka soo horjeedaa Dhismaha Wadada Tareenka Shiinaha-Kyrgyzstan-Uzbekistan…
Wada-xaajoodka dhismaha waddooyinka tareenada ee Shiinaha iyo China
Sındırgı Mayor Slow: Sındırgı- Allowance for Road Akhisar Land
Shiinaha-Kyrgyzstan-Uzbekistan ayaa si toos ah u bilaabaya 2014
Kyrgyzstan ayaa waydiisatay waddooyinka baabuurta ee sugaya Uzbekistan
Kyrgyzstan waxay diidday mashruuc tareen oo shiineys ah
Kyrgyzstan oo doonaya in ay ka qayb qaadato mashruuca tareenka
Dhibaatada xawaaraha shidaalka ee u dhaxaysa Kazakhstan iyo Kyrgyzstan ayaa xaliyay
Shirkadda Shiinaha-Kyrgyzstan iyo Uzbekistan ee dhismaha waddada si ay u bilaabaan 2016
Shiinaha ayaa doonaya in uu dardar-galiyo dhismaha waddada tareenka ee China iyo Kyrgyzstan
600 baabuur xamuul iyo xamuulka qaadaaya
gaadiid xamuul oo furan
Gaadiidka xamuulka qaada ee la qaboojiyey
Waxaa loo dhoofiyaa Kyrgyzstan
Shirkadaha Maraakiibta ee Kyrgyzstan